Ukushiya Ilifa Elikhumbulekayo- BullyingCanada
Uya kukhunjulwa ngokufudumeleyo ngokuxhasa ulutsha oluxhatshazwayo kwizizukulwana ezizayo
Ngokwenza isipho esinovelwano nesikhumbulekayo ku BullyingCanada kwilifa lakho, uya kuba nefuthe elihle kubomi babantwana abaxhatshazwayo, nokuba sele uhambile. Nceda uthethe nomcebisi wakho wezezimali ukuze ukhethe uhlobo lwesipho selifa esifanelana neemfuno zakho.
Isipho kwintando yakho:
Kwintando yakho, unokubonisa uvelwano lwakho kubantwana abaxhatshazwayo ngokumisela isipho BullyingCanada I-Inc. Ungamisela isixa esithile semali, iqhekeza lepropati, okanye ipesenti eshiyekileyo yelifa lakho. Unako kwakhona ukunikela ngezibambiso ngomyolelo wakho. Ngokwenza njalo, ilifa lakho aliyi kuhlawula nayiphi na irhafu yenzuzo enkulu kwixabiso lezibambiso ezixatyisiweyo. Kulula kwaye akubizi kakhulu ukongeza isipho sesisa kumyolelo wakho ngokuba negqwetha liyile i-codicil echaza iinjongo zakho zokupha. Ngokwenza njalo, akunyanzelekanga ukuba utshintshe intando yakho yonke. Qinisekisa ukuba i-codicil yakho igcinwe kunye nomyolelo wakho, kwaye umabi wakho unokufikelela kuwo omabini amaxwebhu. Khuphela wethu Isipho kwiPhepha leNgcaciso yeMvume kunye nathi Iphepha leNgcaciso yeZipho zeZibambiso Ukufunda kabanzi.
Isipho se-inshorensi siyakwenza ukuba usebenzise amandla akhulayo e-inshurensi ukuphindaphinda ububele bakho. Unganikela ngepolisi ye-inshurensi yobomi obuhlawulweyo ongasayidingi ngokwenza BullyingCanada Iquka umnini kunye nomxhamli wepolisi yakho. Ukuba kusekho iintlawulo ezityalwa kwipolisi yakho, ngokuchaza amagama BullyingCanada I-Inc. njengomnini wepolisi yakho, BullyingCanada uya kukuthumelela iirisithi zesisa zonyaka zeentlawulo zanyanga le oqhubeka nokuzihlawula. Ukuba igama BullyingCanada I-Inc. njengomxhamli wepolisi ye-inshorensi yobomi okanye naluphi na uhlobo lwemveliso ye-inshorensi (imali yonyaka, imali egciniweyo ebhalisiweyo, iimali ezahluliwe), ngoko ke ilifa lakho liya kufumana irisithi yerhafu yexabiso elipheleleyo lesipho ngexesha lokudlula kwakho. Khuphela wethu Iphepha leNgcaciso ye-Inshurensi yesipho Ukufunda kabanzi.
Umnikelo wee-RRSP kunye nee-RRIFs:
Kulula ukunikela ngengeniso yeSicwangciso sakho soMhlalaphantsi esibhalisiweyo (RRSP) kunye neNgxowa-mali yoMhlalaphantsi eBhalisiweyo (RRIF) ukuze BullyingCanada I-Inc. Fumana ifom yokutshintsha umxhamli kwiziko lemali eliphethe olu londolozo kwaye utshintshe umxhamli we BullyingCanada I-Inc., kwaye ingenise ifomu kweli ziko lezemali. Khuphela wethu Iphepha leNgcaciso ngesipho soMhlala-phantsi Ukufunda kabanzi.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane neeNkonzo zoMnikelo: (877) 352-4497 okanye i-imeyile: [imeyile ikhuselwe].